Luis Suarez ayaa dareemay inuu u qalmo ixtiraam badan oo uu ka helo Barcelona xagaagii lasoo dhaafay wuxuuna shaaca ka qaaday inuu ka careysan yahay madaxda kooxda markii ay u sheegeen sababta ay u sii daayeen.
Ronald Koeman ayaa badalay Quique Setien, kaasoo si cad ugu sheegay Suarez inuusan qeyb ka noqon doonin qorshayaashiisa.
Suarez, oo xilli ciyaareedkaan ahaa gooldhaliyaha ugu sarreeya La Liga kooxda Atletico Madrid, ayaa sheegay in Barcelona ay u sheegtay inuu aad ugu weynaa inuu ka ciyaaro heerka ugu sarreeya inkasta oo 34 jirkaan uu ka aarsaday Barcelona qaab ciyaareedkiisii ​​kooxda. Atletico.
Aad ayaan u xanaaqay markii ay ii sheegeen inaan da ’ahay oo aanan u ciyaari karin heer sare isla markaana aanan la ciyaari karin koox weyn. “Ma jecli,” ayuu Suarez u sheegay France Football.
Wuxuu sii raaciyey: “Haddii aanaan wax u qaban lahayn Barcelona seddex xilli ciyaareed ama ka badan, waan aqbali lahaa fariintooda. Laakiin xilli ciyaareed kasta waxaan u dhaliyey in ka badan 20 gool Barcelona. Marwalba waxaan hayey macluumaad wanaagsan, waxaan kaliya ka dambeeyay Leo Messi .
“Maanta waxaan aragnaa inaysan sahlaneyn u ciyaarida Barca – inbadan oo kamid ah ciyaartooydii ay lasoo saxiixdeen uma ciyaaraan sidii lafilaayay. Waxaan u ciyaarayay Barca mudo lix sano ah isla markaana aan ku ciyaaray isla heerkaas isla markaana aan sameeyay wixii la iga rabay. “
Messi oo ay saaxiibo dhow yihiin Suarez ayaa ku tilmaamay bixitaankii laacibka reer Uruguay mid waali ah, halka Suarez uu sheegay in Barcelona ay u baahan tahay maxaa yeelay isaga ayaa ugu goolasha badan La Liga isagoo leh 16 gool.
Atletico ayaa hogaamineysa La Liga, halka Barcelona ay dhibtooneysay tan iyo markii uu ka tagay Suarez.
“Xaaladda Barca way is bedeshay, kooxda waxay u baahan tahay inay is bedesho,” ayuu yiri Suarez.
Waan aqbalay taas, waxa kaliya ee iga careysiiyay waxay aheyd sida ay wax udhaceen, waxaan qabaa inaan u qalmay ixtiraam badan. ”
Maqnaanshaha Van Dijk cudur daar malahan “